Fri, May 25, 2018 | 01:35:52 NST
एमालेले कुन जिल्लामा कति स्थानीय तह जित्यो ?
काठमाडौं, असोज ९ – प्रदेश नम्बर २ का १ सय ३६ स्थानीय तहमा भएको चुनाव अन्तर्गत अहिलेसम्म १ सय ३१ तहको नतिजा आएको छ । यसमा नेकपा एमालेले ६ जिल्लामा गरी १७ स्थानीय तहमा विजयी भएको छ ।
१३१ स्थानीय तहको नतिजा, कसले कहाँ जिते ?
काठमाडौं, असोज ९ – प्रदेश नं. २ मा भएको स्थानीय तह चुनावको मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नतिजा सकिने बेला हुन लाग्दा नेपाली कांग्रेसको अग्रता कायमै छ ।
​गरुडा नगरपालिकामा संघीय समाजवादी फोरम ७३ मतले विजयी
रौतहट, असोज ९ – रौतहटको गरुडा नगरपालिकाको मेयरमा संघीय समाजवादी फोरम र उपमेयरमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ ।
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एक जनाको ज्यान गयो
नवलपरासी, असोज ९ – पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्र्तगत नवलपरासीको मध्यविन्दु नगरपालिका– १०, चोरमारामा आइतबार राति ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एक जनाको ज्यान गएको छ । एक जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।
वीरगञ्ज महानगरको ताजा अपडेटः कांग्रेससँगको दूरी बढाउँदै संघीय समाजवादी फोरम
पर्सा, असोज ९ – प्रदेश नम्बर २ को एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्जमा संघीय समाजवादी फोरमले नेपाली कांग्रेससँगको दूरी बढाउँदै लगेको छ ।
सबैलाको मेयरमा कांग्रेस, उपमेयरमा माओवादी विजयी
धनुषा, असोज ९ – धनुषाको सबैला नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ । मेयरमा विजयशंकर साह विजयी हुनुभएको हो । उपमेयरमा भने माओवादी केन्द्रकी निलुदेवी कापड विजयी हुनुभएको छ ।
संघीय समावादी फोरम नेपालले जितेका स्थानीय तह यी हुन्
काठमाडौं, असोज ९ – प्रदेश नम्बर २ का १ सय ३६ स्थानीय तहमा भएको चुनाव अन्तर्गत अहिलेसम्म १ सय २९ तहको नतिजा आएको छ ।
​कलैया उपमहानगरपालिकामा एमालेको अग्रता कायमै
बारा, असोज ९ – बाराको कलैया उपमहानगरपालिकामा एमालेको अग्रता कायमै छ । एमालेले विनोदप्रसाद शाह ९ हजार ७ सय १९ मतसहित अगाडि हुनुहुन्छ ।
नतिजा आउन बाँकी सात स्थानीय तहमा कसको अग्रता ?
काठमाडौं, असोज ९ – प्रदेश नं. २ का १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये अब ७ ठाउँको मात्रै नतिजा आउन बाँकी छ । मतगणना भैरहेका सातवटा स्थानीय तहमध्ये तीनमा संघीय समाजवादी फोरम र दुई/दुईमा कांग्रेस र एमालेको अग्रता छ ।
माओवादीले कुन जिल्लामा कति स्थानीय तह जित्यो ?
काठमाडौं, असोज ९ – प्रदेश नम्बर २ का १ सय ३६ स्थानीय तहमा भएको चुनाव अन्तर्गत अहिलेसम्म १ सय २९ तहको नतिजा आएको छ । यसमा नेकपा माओवादी केन्द्रले ६ जिल्लामा गरी २१ स्थानीय तहमा विजयी भएको छ
यी हुन् कांग्रेसले जितेका स्थानीय तह
काठमाडौं, असोज ९ – प्रदेश नम्बर २ का १ सय ३६ स्थानीय तहमा भएको चुनाव अन्तर्गत अहिलेसम्म १ सय २९ तहको नतिजा आएको छ । यसमा नेपाली कांग्रेसले ८ जिल्लामा गरी ३७ स्थानीय तहमा विजयी भएको छ ।
राजपाले कुन जिल्लामा कति स्थानीय तह जित्यो ?
प्रदेश नं. २ अहिलेसम्मको नतिजा
​प्रदेश नं. २ अहिलेसम्मको नतिजा
काठमाडौं, असोज ८ – प्रदेश नम्बर २ मा भएको स्थानीय तहको चुनावको मतगणना भइरहेको छ । अहिलेसम्म कांग्रेसको अग्रता छ ।
वीरगञ्ज महानगर : कांग्रेससँगको दूरी बढाउँदै संघीय समाजवादी फोरम
पर्सा, असोज ८ – प्रदेश नम्बर २ को एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्जमा संघीय समाजवादी फोरमले नेपाली कांग्रेससँगको दूरी बढाउँदै लगेको छ ।
आदर्श कोटवाल गाउँपालिकामा संघीय समाजवादी विजयी
बारा, असोज ८ – बाराको आदर्श कोटवाल गाउँपालिकामा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल विजयी भएको छ । अध्क्षमा संघीय समाजवादीका मुु्स्तफा अन्सारी २७८२ मतका साथ विजयी हुनुभएको छ ।
महोत्तरीमा मतगणना सकियो, राजपा पहिलो
महोत्तरी, असोज ८ – महोत्तरी जिल्लाको १५ वटै स्थानीय तहको मतगणना सकिएको छ । यस जिल्लामा स्थानीय तह चुनावमा राजपा नेपालले सात स्थान हासिल गर्दै पहिलो भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत किरणकुमार पोखरेलले बताउनुभयो ।
प्रमुख पदमा अहिलेसम्मको नतिजा : कसले कति तह जिते ? (सूचिसहित)
रौतहटको कटहरिया नगरपालिकामा माओवादी विजयी
रौतहट, असोज ८ – रौतहटको कटहरिया नगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्र विजयी भएको छ ।
सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकामा कांग्रेस विजयी
सप्तरी, असोज ८ – शम्भुनाथ नगरपालिकाको मेयर उपमेयर दुवै कांग्रेसले जितेको छ । कांग्रेसका योगेन्द्रप्रसाद चौधरी मेयरमा २ हजार ७ सय ७८ मतसहित विजयी हुनुभयो ।
​सप्तरीको कञ्चनरुपमा एमाले मेयर, उपमेयर कांग्रेस
सप्तरी, असोज ८ – सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाको मेयरमा एमालेका बसन्त मिश्र विजयी हुनुभएको छ । उहाँले ५ हजार ४२ मत पाउनु भयो । निकटम प्रतिद्वन्द्वी रहेका कांग्रेसका उम्मेदवारले ४ हजार १ सय ७५ मत पाउनुभयो ।
कविलासीको मेयरमा राजपा, उपमेयरमा संघीय समाजवादी विजयी
सर्लाही, असोज ८ – सर्लाहीको कविलासी नगरपालिकामा राष्ट्रिय जनता पार्टीका मेयरका उम्मेदवार कौशल किशोर यादव विजयी हुनुभएको छ । उपमेयरमा भने संघीय समाजवादी फोरमका राधादेवी विजयी हुनुभएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरमा संघीय समाजवादी फोरमको अग्रता कायमै
पर्सा, असोज ८ – प्रदेश नम्बर २ को एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्जमा संघीय समाजवादी फोरमको अग्रता कायमै छ ।
​स्थानीय चुनावमा एमाले पहिलो
काठमाडौं, असोज ८ – स्थानीय तहको चुनावमा एमाले पहिलो दल हुने निश्चित भएको छ । २०७० सालमा भएको संविधानसभा चुनावमा दोस्रो दल बनेको एमाले स्थानीय चुनावमा पहिलो दलको रुपमा स्थापित हुन लागेको हो ।
जनकपुर उपमहानगरमा राजपा कांग्रेस भन्दा दोब्बर बढी मतले विजयी
धनुषा, असोज ८ – धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकामा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) विजयी भएको छ ।
मधेस आन्दोलनको उद्गमस्थल लहानमा एमालेको जित यसरी सम्भव भयो
प्रदेश नं. २ का धेरै स्थानीय तहमा पराजित भएको एमाले मधेस आन्दोलनको उद्गमस्थल मानिने सिरहाको लहानमा जित हात पार्न सफल भयो । मधेसवादी पार्टीहरुबीचको फाटो र लहान नगरपालिकालाई सधैं विभाजन गर्ने जातीय मतका कारण यहाँ एमाले विजयी भएको स्थानीय जानकारहरु बताउँछन् ।
धनुषाः सबैला नगरपालिकामा कांग्रेसको अग्रता
धनुषा, असोज ८ – धनुषाको सबैला नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिएको छ ।
महोत्तरीमा राजपा पहिलो, एमाले निल
महोत्तरी, असोज ८ – महोत्तरीका सबै स्थानीय तहको नतिजा आएको छ । पाँच गाउँपालिका र १० नगरपालिका गरी १५ स्थानीय तह रहेको महोत्तरीमा सात तहमा जितेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) पहिलो पार्टी बनेको छ ।
महोत्तरीः मनरा सिस्वा नगरपालिकामा राजपा विजयी
महोत्तरी, असोज ८ – महोत्तरीको मनरा सिस्वा नगरपालिकामा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) विजयी भएको छ ।
सिरहाको सबै स्थानीय तहको नतिजा आयो, कुन तहमा को विजयी ?
सिरहा, असोज ८ – सिरहामा ८ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका गरी १७ स्थानीय तह रहेकोमा सबै तहको नतिजा आएको छ । सिरहामा माओवादी केन्द्रले ६ तथा संघीय समाजवादी फोरम नेपालल पाँच तहमा जितेका छन् ।
सिरहा नगरपालिकाको मेयरमा संघीय समाजवादी र उपमेयरमा एमाले विजयी
सिरहा, असोज ८ – सिरहा नगरपालिकाको मेयरमा संघीय समाजवादी फोरमका अशेश्वरप्रसाद यादव विजयी हुनुभएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरमा संघीय समाजवादी फोरमको अग्रता
पर्सा, असोज ८ – प्रदेश नम्बर २ को एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्जमा ८४ हजार भन्दा बढी मत खसेकोमा ४५ हजार २ सय २३ मत गन्दा कांग्रेसलाई पछि पार्दै संघीय समाजवादी फोरम नेपालले अग्रता लिएको छ ।
१२४ स्थानीय तहको नतिजा, कहाँ कसले जिते ?
रौतहटः गरुडा नगरपालिकामा संघीय समाजवादी फोरमको अग्रता
रौतहट, असोज ८ – रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा संघीय समाजवादी फोरम नेपालले अग्रता लिएको छ ।
कलैयामा अझै १० वटा वडाको मत गन्न बाँकी
बारा, असोज ८ – बाराको कलैयाको मेयरमा एमालेका विनोदप्रसाद साहको अग्रता कायमै छ ।
धनुषा, असोज ८ – धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार राजपा नेपालको अग्रता कायमै छ ।
महोत्तरीः पिपरा गाउँपालिकामा राजपा विजयी
महोत्तरी, असोज ८ – महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) विजयी भएको छ । अध्यक्ष राजपाका विनोद चौधरी २ हजार ७ सय ७५ मतसहित विजयी हुनु भएको हो ।
बाराः महागढीमाई नगरपालिकामा कांग्रेस विजयी
बारा, असोज ८ – बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ ।